ရွှေရင်ကျော်ဣစ္ဆာသယမဟိဒ္ဓိစေသည် ဘုရား၏တရားတော်များ အတိုင်းလိုက်နာထားပြီး ကြိုးစားအားထုတ် ကျင့်ကြံရသော အထက်လမ်းစဉ်ဂိုဏ်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် လူတိုင်းမလုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ဘ၀တစ်သက်စာ တင်မကဘဲ နောက်ဘ၀ဆိုက်တိုင်း တိုင်အောင်အထိ ဘုရားများကို တင်တည်ပြီး သစ္စာဆိုထားသည့်ဂိုဏ်းဖြစ်သည်။ မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ်အနည်းဆုံး ဘုရားရှိခိုးဖြစ်သည်။ ညအချိန်ရလျှင် ပုတီးစိတ်၊ တရားထိုင်ပါသည်။ ဒီ့ထက်ပိုပြီးကျင့်ကြံနိုင်လေ အာဏာစက်ပြင်းထန်လေပဲ ဖြစ်သည်။
အရာရာတိုင်းကို ဘယ်သူက ဘယ်လောက်အထိ စကားပြောချိုချိုဖြင့်ပြောခဲ့လျှင် ထိုစကားကို မယုံကြည်ပါနှင့်။ လက်တွေ့ကျကျလေ့လာပါ။ အသေးစိတ်လေ့လာစမ်းစစ်ပါ။ ပြီးတော့ သုံးသပ်ပါ။ ဦးနှောက်နှင့် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးမှ ယုံကြည်ပါ။ အပြောချိုပေမယ့် နောက်ကျောကို ဓါးနှင့်ထိုးတတ်သဖြင့် ကိုယ့်ကို ဒုက္ခပေးနိုင်သလား မပေးနိုင်ဘူးလားကို ဝေဖန်သုံးသပ် စမ်းစစ်ပြီးမှ ယုံကြည်ပါ။ တပည့်လား တပဲ့လား
တပည့်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့အတွက် ဆရာ့အနားမှာ ချဉ်းကပ်ပြီး မသိသည်များကို မေးမြန်းပြီး. သိသင့်သည်များကို ဆရာသမားများက သင်ကြားပြသပေးပါက အထူးဂရုပြုမှတ်သားထားရမည်။ ဆရာနှင့် အနေဝေးသောတပည့်နှင့် အနေနီးသောတပည့်ချင်း မတူညီနိုင်ပါဘူး။ အမွေဆိုတာ ခံစား/စံစားထိုက်တဲ့သူမှ ခံစား/စံစားရတတ်သည်။
လောကမှာ လူဖြစ်လာတာချင်းတူညီနိုင်ပေမယ့် မတူညီတဲ့ အချက်တွေရှိပါတယ်. အဲ့ဒီ့ မတူညီတဲ့အချက်တွေကနေ အခြေခံပြီး ကွဲပြားသွားသွားပါတယ်. နောက်ဘ၀က ပါလာတဲ့ ကုသိုလ်ကံကအခြေခံပါတယ်. ပြီးတော့ ယခုလက်ရှိဘ၀မှာ ထားထားတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ သီးခံခြင်းတရားထားပြီး သူတစ်ပါးအပေါ်မှာ ပေးဆပ်ရဲတဲ့စိတ်ဓါတ်တွေပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်. တစ်ချို့ ဘုရားတည်ဖို့ကံ မပါလာခဲ့သောကြောင့် ပိုက်ဆံရှိပေမယ့် သေသာသေသွားတယ် ဘုရားတည်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ ကျောင်းဆောက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ မိမိပြုလုပ် လှူဒါန်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာ အကျိုးလိုလို့ညောင်ရေလောင်းတာမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့ ဖြူစင်တဲ့စိတ်လေးထားပြီး လှူဒါန်းပါ။
ဒီလိုမျိုး သီလကို သစ္စာဖြင့်ခံယူရပါတယ်
ရွှေရင်ကျော် ဂိုဏ်းသားများဟာ ကာမပိုင်လင်ရှိမယားအားကိုယ်ထိကာယမကျူးလွန်ခြင်းမပြုရ၊ အရက်သေစာမသောက်စားရ ဒါဟာနှစ်ပါးသီလပဲ။ ရွှေရင်ကျော်ဂိုဏ်းဝင်တိုင်း အဲ့သစ္စာနှစ်ပါးကို အသက်နဲ့ရင်းပြီး နေ့စဉ်စောင့်ထိန်းပြီး သီလယူနေရတယ်ဆိုတာကို သိစေလိုပါတယ်။ သစ္စာဆိုတာ ပျက်ခဲ့ရင် ဘုရားကခွင့်လွှတ်ပေမယ့် ပျက်တာနဲ့ နတ်မြတ်နတ်ကောင်းတွေက ဒဏ်ပေးပြီးလျှင် မာနတ်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေဖြစ်တဲ့ နတ်ဆိုးတွေနဲ့ မကောင်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အမဲဖျက်သလို ၀ိုင်းဖျက်ကြမှာပဲ။
ကျွန်တော်တင်လိုက်တာဟာ အထဲမှာ ဘာစာမှမပါတဲ့ မျက်နှာဖုံးသက်သက်ကိုသာ စာအုပ်တင်တိုင်း ယူလို့ရမယ်လို့ ထင်သည့် ပြောဆိုခဲ့သော၊ မေးလ်ပို့ခဲ့သော၊ ဝေဖန်ခဲ့သော တချို့ရွှေရင်ကျော် ဂိုဏ်းသားတွေ သိစေချင်လို့ တင်ပေးလိုက်ခြင်း သက်သက်ဖြစ်ပါတယ်။ format type ပြောင်းထားသလို win rar နဲ့ Hjsplit နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ password ၂ ဆင့်ခတ်ထားပါတယ်။ ဘာလို့ စာအုပ်မပါပဲ တင်သလဲမေးရင်တော့ ၀ဘ်ဆိုက်မှာ စာအုပ်တွေ တင်ပေးလို့ရှိရင် သူများတွေ သိကုန်မှာပေါ့။ ဂိုဏ်းစည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်တာပဲဆိုတဲ့ သုံးသပ်ဝေဖန်နေတဲ့ သူတစ်ချို့ကို သိစေချင်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ရခဲ့သလား ကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ သင်္ခေပနယျကုထုံးကျမ်းလောက်များဗျာ လာတင်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့သူဟာ ဂိုဏ်းကို ဆော်ကားတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ကုထုံးကျမ်းကို စခဲ့တာ ဒီစာအုပ်သေးသေးလေးကနေ စခဲ့တာပါ။ ဒါအဘဘိုးတော်ဟန် မူပိုင် ကိုင်ဆောင်ခဲ့တဲ့စာအုပ်ပါ။ စာအုပ်သေးပေမယ့် ရာဇ၀င်ကို ပြန်လှန်ပါ။ ၉ ဆင့်ဖြစ်လဲ ကျွန်တော်အထင်မကြီးပါဘူး ကို?? ရေ။ ဘာလို့လဲလို့မေးရင် ရွှေရင်ကျော်ဂိုဏ်းမှာ အဆင့်(၉)ဆင့်ထိုးထားလဲပဲ ကိုထိုးထားတဲ့ ရွှေရင်ကျော်ဂိုဏ်းရဲ့ ရာဇ၀င်သမိုင်းကြောင်းနဲ့ မေးသမျှတွေကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြနိုင်မှသာ ဂိုဏ်းဝင်မည်တာပါ။ ကျွန်တော်အခုချိန်အထိ ဘာစာအုပ်မှ မတင်ရသေးပါ။ တစ်ချို့(၉)ဆင့် ရောက်တာတောင်မှ ဂိုဏ်းအကြောင်း ဂဃနဏ မရှင်းပြတတ်တဲ့ ဆရာတစ်ချို့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် ဝေဖန်ပြီးပြောချင်းမဟုတ်ပါ။ အားလုံးကို လေးစားထားပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့တစ်ချို့သော သူများကြောင့် ရွှေရင်ကျော်ဆိုတာ ဘာမှန်းတောင် မသိတဲ့သူတွေ အများကြီးပါ။ ကိုထိုးထားတဲ့ စမ ကိုမေးတာတောင်မှ သေချာမရှင်းပြတတ်တော့ သူရီစရာဖြစ်သွား တတ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ရောက်ခဲ့လျှင် ကျွန်တော် ဂိုဏ်းမှတာဝန်ရှိသူများနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါမည်။ အဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော် လုပ်သင့်တာကို စလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့အတွက် စိတ်မတိုပါနဲ့ စိတ်မဆိုးကြပါနဲ့။ ရွှေရင်ကျော်ဂိုဏ်းဟာ သီးခံခြင်းတရား လက်ကိုင်ထား ရမည့်ဂိုဏ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကို သတိချပ်ပေးပါ။ ကိုယ့်ကြောင့် ထင်ရောင်ထင်မှားတွေ မဖြစ်ပါစေနဲ့။ မကြာခင် ဂိုဏ်းရဲ့ ရာဇ၀င်တွေကို သိကြရမှာပါ။ ကျွန်တော်အားလုံးကို ပေးသိစေချင်ပါတယ်။ ခွင့်ပြုချက်ဆိုတာ လိုအပ်တာကြောင့် အခုလိုကျန့်ကြာနေတာပါ။ မှတ်ချက် သင်္ခေပနယျကုထုံးကျမ်း စာအုပ်ထဲတွင် ဘာမှမပါသေးပါ။ စာအုပ်ပေါင်းများစွာရှိပါသည်။ ရွှေရင်ကျော်သုတေသီ
သိဒ္ဓိစမများ (မူရင်း) အားလုံးပဲ ရွှင်လမ်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ ရန်ကုန်ရောက်လျှင် အချိန်မရွေး လာရောက် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်ဆိုထားသော သစ္စာကို လိုက်လံဆိုနိုင်မှ လာရောက်ဆွေးနွေးစေလိုပါသည်။ ဆွေးနွေးခြင်းသည် အသိပညာခြင်း ဖလှယ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကျွန်တော်မသိသည်များ ရှိခဲ့သော် မေးမြန်းခွင့်ပြုရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော် ဆေးကုသတိုင်း ဆိုသောသစ္စာနှင့် ဂိုဏ်းတော်အပေါ်တွင် ထားရှိသည့် ဆိုခဲ့သည့် သစ္စာတို့အား အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ သားတော်သည် ရွှေရင်ကျော် ဣစ္ဆာသယ မဟိဒ္ဓိစေဂိုဏ်းတော်ကြီးတွင် ပညာခံယူပြီးသည့် အချိန်မှစပြီး ဘုရား၊ တရား၊ သံင်္ဃာ၊ မိဘ၊ ဆရာ သမားများအား ကာယကံ၊ ၀ဇီကံ၊ မနောကံ ကံသုံးပါစလုံးဖြင့် ကျူးလွန်ခြင်း အလျှင်း မရှိခဲ့ပါ။ အမဲသား၊ ကျွဲသား/နွားသား များကို သိလျှက်နှင့် စားသုံးခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ အရက်သေစာအား ဆေးဝါးအဖြစ်တောင် သောက်သုံးခြင်း၊ လိမ်းကျံခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ ကာမပိုင်လင်ရှိမယားအား ခိုးယူပေါင်းသင်းဖြင်းအလျင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဤသစ္စာမှန်ကန်ခဲ့ပါက လက်ဆယ်ချောင်းမှ ဆေးလက်လက်ဖြစ်ပြီး၊ ရေအတိက ဆေးအတိဖြစ်ပါစေပြီးလျှင် ပယောဂအပေါင်း၊ အဆိပ်အပေါင်းတို့ကို နိုင်နင်းနေနိုင်သော အဘဆရာများကုသ သကဲ့သို့ စွမ်းဆောင်နိုင်သော ပါရမီရှင်ဖြစ်ရပါလို၏။ အကယ်၍ ၄င်းသစ္စာ(၈)ချက်မှ တစ်ပါးပါးပျက်ခဲ့သည်ရှိသော် ယခုတထိုင်တည်းနှင့်ပင် ဘုရားစင်ရှေ့၌ပင် မသူသော်အောက်လမ်း မိစ္ဆာ၊ နတ်မိစ္ဆာများ၏ လက်ချက်ဖြင့် သွေးပွက်ပွက်အံသေလွန်ပြီးလျှင် မဟာအ၀ီဇိငရဲတွင် မကျွတ်မလွတ်တမ်းခံ ရပါစေဘုရား။
ယခု ရွှေရင်ကျော် ဣစ္ဆာသယ မဟိဒ္ဓိစေဂိုဏ်းတော် ကိုယ်စားပြု ၀ဘ်ဆိုက်အား လှူဒါန်းခြင်းသည်။ ကိုယ်ကျိုးအတွက်မပါ။ ဖြူစင်သည့် စေတနာသက်သက်ဖြင့် ပြုလုပ်လှူဒါန်းခဲ့ဖြင်းဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကိုယ်ကျိုးဖက်ပြီး နာမည်ကြီးလိုစိတ်ဖြင့် ဂိုဏ်းတော်အမည်အား ခုတုံးလုပ်ခဲ့သော် မမှန်မကန်ထွက်ဆိုမှု့များ ရှိခဲ့သော် ယခုချက်ခြင်း ဂိုဏ်းတော်မှပေးသော အပြစ်အားခံယူပြီးသည့်အပြင် (၇)ရက်အတွင်း အသိစိတ်ကင်းမဲ့သော အရူးတစ်ယောက် ဖြစ်ရပါလို၏။ အကယ်၍ မှန်ကန်သောသစ္စာ၊ မွန်မြတ်သော စေတနာ သန့်သန့်ဖြင့် ပြုလုပ် လှူဒါန်းခဲ့သည် မှန်ကုန်ခဲ့သော် လူအများချစ်ခင်လေးစားမှု့ကို ရရှိပြီးလျှင်၊ မှောင်မိုက်နေသော အသိဥာဏ်များရှိက ဖယ်ရှားပေးတော်မူပြီးလျှင်၊ ပြုလုပ်ထားသည့် ၀ဘ်ဆိုက်သည် ဣစ္ဆာသယ မဟိဒ္ဓိစေဂိုဏ်းတော်ကြီး၏ ကိုယ်စားပြုဝဘ်ဆိုက်အဖြစ် တသက်တာလုံး တည်တံ့နေပါစေဘုရား။ သမိုင်းတွင် ဂိုဏ်းတော်၏ အစဉ်အဆက်များ၊ သမိုင်းများအားလုံးအား နောင်လာနောက်သားများ လေ့လာနိုင်စေရန်အတွက်၊ သိရှိနိုင်စေရန်အတွက် အဓွန့်ရှည်တည်တံ့နိုင်ပါစေဘုရား။ ဒါကျွန်တော် ဆိုတဲ့သစ္စာတရားပါပဲ။ ကျွန်တော် ရန်ကုန်ရောက်သည်နှင့် ဂိုဏ်းတော်၏တာဝန်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိန်းထားနေသော ဆရာကြီးများထံတွင် မေးမြန်းပြီးသည့်နောက် လာရောက်ပြီး ဆိုက်အကြောင်းအားမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ Read More
အားလုံးကို သိစေချင်တာကတော့ ကျွန်တော် ဒီဆိုက်ကို စပြီးတည်ဆောက်လိုက်တာဟာ domain name ကို တစ်ခြားသူတွေ ၀ယ်သွားမှာ စိုးရိမ်တာရယ် နာမည်အလွဲသုံးစား လုပ်နေတာရယ်ကြောင့်ပါ. ပြီးတော့ တကွဲတပြားစီ ဖြစ်နေသော ရွှေရင်ကျော် ဂိုဏ်းသားများ အားလုံး online မှာ စုံစည်းခွင့်ရရှိအောင်လို့ စီစဉ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်. ယခုအချိန်အထိ ဘယ်ဂိုဏ်းဝင်တစ်ယောက်ကမှ ပြုလုပ်ထားတာ မရှိတဲ့အတွက် ကျွန်တော်က လှူဒါန်းလိုက်တဲ့အနေနဲ့ ပြုလုပ်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်. (ယခုအချိန် ရွှေရင်ကျော် နာမည်ဖြင့် ဆေးကုသပြီး ခြေဖ၀ါးတွင် ဘုရားပုံထိုးထားသည့် ဂိုဏ်းများရှိနေပါသည်) org ရဲ့ နာမည်ဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း ပိုင်ဆိုင်တာ မဟုတ်ဘူး. Organization လို့ခေါ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းက ပိုင်တဲ့နာမည်ပါ. အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ .org နဲ့ တင်လိုက်တာပါ။ ကျွန်တော်ပြောပြပြီးပါပြီ ကိုစာကလေးနဲ့ တစ်ခြား ညီအစ်ကိုတွေ မရှင်းတာနေပါလိမ့်မယ်. အခုဒီဝဘ်ဆိုက်ကနေ ဖိုရမ်သဘောမျိုး (or)social network ဆိုက်တစ်ခု အဖြစ် ပြုလုပ်သွားမှာပါ။ အဲ့အထဲမှာ
သတ်မှတ်ချက်များအား ဂိုဏ်းတော်တွင် တာဝန်ရှိသည့် ဆရာကြီးများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးမှသာ အတည်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။လေ့လာသူ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များအနေနှင့်ကတော့ ကုသနေသည့် ပုံများနှင့် video(အသံမပါ)များကို ကြည့်ရှု့ခွင့်ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ အသံဖျောက်ထားရသည့်အကြောင်းမှာ personal ကိစ္စရပ်များ ရှုပ်ထွေးလာမည် စိုးသောကြောင့် ဖျောက်ထားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးခွင့်လွှတ်နားလည်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. ဂိုဏ်းဝင်မဟုတ်သော သူများသည် ဆေးကုသသည့် စာအုပ်များ၊ "စမ"များကို ကြည့်ရှု့ခွင့်တော့ ရရှိမည် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာလည်း ဂိုဏ်းတော်မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းမို့လို့ပါ။ ဂိုဏ်းဝင်များအားလုံး သိထားစေရန်မှာ ယခုဆိုက်အား တည်ထောင်လိုက်ကတည်းက ရွှေရင်ကျော်အကြောင်း သိထားပြီးသား ဖြစ်လို့ဆိုတာကို သိစေလိုပါတယ်။ ကိုးဆင့်အထိ ယူလို့ရနေပြီ ဖြစ်ပေမယ့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မယူဖြစ်သေးတာပါ။
ထို့အတွက်ကြောင့်မို့ ၀ဘ်ဆိုက်လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တော့ အားလုံးကို ကြည့်လို့ရလိမ့်မယ်လို့ ခပ်လွယ်လွယ်မတွေးပါနဲ့။ ဂိုဏ်းအကြောင်းကို ဂဃနဏ သိအောင် အရင်ကြိုးစားကြည့်ပေးပါ ပြီးမှဝေဖန်ပါ။ ဒါဟာ သဘာဝကျပါတယ်။ ယခုဒီဝဘ်ဆိုက်ကို တာဝန်ယူနိုင်မည့်သူ ထိန်းသိမ်းနိုင်မည့်သူ ရွှေရင်ကျော် ဂိုဏ်းအဖွဲ့ထဲမှ အနည်းဆုံး5ဆင့်နှင့်အထက်ရှိသော မည်သူမဆို ကမ်းလှမ်းလာပါ။ Moderator များ အဖြစ် တာဝန်ခန့်အပ်ပေးဖို့ဆန္ဒရှိပါသည်။ သို့သော် မိမိအဆင့်အလျှောက် တတ်မြောက်သင့်သော ဂိုဏ်းရဲ့ "စမ"များအကြောင်း၊ အဘဆရာမည်သူမည်ဝါနှင့် အခြားသော အကြောင်းအရာများကို မေးမြန်းမည့်အပြင်၊ ၀ဘ်ဆိုက်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု့စွမ်းရည် ရှိ/မရှိကိုလည်းပဲ မေးမြန်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ အစမ်းခန့်အပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ မေးမြန်းမှု့အား စာဖြင့်မေးမြန်းမည် မဟုတ်ပါ။ အသံဖြင့် မေးမြန်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
Domain name အား ကျွန်တော့်အနေဖြင့် www.shweyinkyaw.org နှင့် www.shweyinkyaw.com နှစ်ခုစလုံးကို ၀ယ်ထားပါတယ်။ .com ကိုတော့ .org နဲ့ redirect ချိတ်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ www.shweyinkyaw.org ဆိုက်ကတော့ဖြင့် အဓိကပင်မဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိုဏ်းဝင်ညီအစ်ကို မောင်နှမများအားလုံးအား လေးစားလျှက်ညီနေမင်း(နည်းပညာ)shweyinkyaw.org@gmail.com